अर्डिनोका लागि सर्वश्रेष्ठ LCD स्क्रीनहरू नि: शुल्क हार्डवेयर
अर्डिनो सम्बन्धी परियोजनाहरू धेरै लोकप्रिय छन् र जसै रास्पबेरी पाईसँग भएको छ, यो कम्पनीहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने नि: शुल्क हार्डवेयर प्रोजेक्टहरू मध्ये एक हो। यसैले हामी कुरा गर्न जाँदैछौं अर्डिनो प्रयोगकर्ताहरूको बीच सब भन्दा लोकप्रिय संयोजनहरू मध्ये एक: LCD + Ardino.
LCD प्रदर्शन एक बढ्दो किफायती र पहुँचयोग्य सहायक हो, जसले हाम्रो Ardino बोर्डको साथ यसलाई राम्रो विकल्प बनाउँदछ। तर के LCD स्क्रीन हाम्रो Ardino बोर्डको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ? कुन प्रोजेक्टहरू एलसीडी र अर्डिनोसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ, के यो संयोजन प्रयोग गर्न लायक छ?
1 LCD के हो?
2 त्यहाँ के प्रकारको एलसीडी स्क्रीनहरू छन्?
3 कुन मोडलहरू सबैभन्दा लोकप्रिय छन्?
3.1 नोकिया 5110११० LCD
3.2 LCD हिताची HD44780
3.3 I2C OLED एलसीडी
3.4 ई-मसी LCD
4 कसरी एक LCD स्क्रीन Ardino मा जडान गर्ने?
5 के हाम्रो परियोजनाको लागि LCD स्क्रिन प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ?
LCD के हो?
नौसैनिक प्रयोगकर्ताहरू एलसीडी के हो भनेर अनजान छन्, यद्यपि उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा यो एक पटक भन्दा बढी देखेका हुनेछन्। LCD लाई तरल क्रिस्टल डिस्प्ले हो, वा के तरल क्रिस्टल डिस्प्ले हुन आउँछ। एउटा सानो वा ठूलो स्क्रिन जुन हामी मध्ये धेरैले विभिन्न उपकरणहरू जस्तै अलार्म घडीहरू, घडी स्क्रिनहरू, क्यालकुलेटरहरू, इत्यादिमा चिनिन्छौं। अन्तहीन इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू जुन एलसीडी + अर्दूनो र नि: शुल्क हार्डवेयरको संयोजनको लागि विस्तार गरिएको छ।
LCD स्क्रीनहरू कुनै पनि नि: शुल्क हार्डवेयरसँग मिल्दो छ, Ardino प्रोजेक्ट बोर्डहरू सहित, यद्यपि तिनीहरूलाई आवश्यक छ कि बोर्डहरूलाई इलेक्ट्रोनिक्स बोर्ड र LCD स्क्रिनको बीचमा जडान गर्नको लागि केहि कनेक्टरहरू वा पिनहरू छन्।.
एक प्राथमिक, त्यहाँ विभिन्न LCD स्क्रिन आकारहरू प्रयोग गर्न बाधा छैन। अर्को शब्दहरुमा, समान अर्डिनो बोर्डले एक size इन्च, २० "LCD स्क्रिन वा × × २ अक्षर आकार प्रयोग गर्न सक्दछ, सानो आकारको कुरा गर्न। तर हामी यो सचेत हुनुपर्दछ Arduino बोर्ड एक ग्राफिक्स कार्ड वा मदरबोर्ड जस्तै छैन, त्यसैले एक स्क्रिनमा प्रदर्शित सन्देश ठूलो स्क्रिनमा जस्तो साना स्क्रिनमा त्यस्तै कार्य गर्दैन, जबसम्म यो उहि अर्डिनो बोर्ड हो।
LCD स्क्रीनमा जडान गर्नको लागि हामीले अर्डिनो बोर्डमा चाहिने पिनहरू निम्न हुन्:
GND र VCC
D0 मा पिन D7
ब्याकलाईट को लागी दुई पिन
यदि तपाईंसँग माथिका साथ पर्याप्त पिन्स र पिनहरू उपयुक्त छन् भने, LCD स्क्रिन Ardino बोर्डको साथ पूर्ण रूपमा काम गर्दछ। त्यसैले जडान अवस्थित छ भनि निश्चित गर्न दुवै उपकरणहरूको पिन जाँच गर्न यो सल्लाह दिइन्छ। जे भए पनि, यो अरुडिनो बोर्डको लागि विरलै हुन्छ कि एलसीडी डिस्प्लेमा जडान हुन सक्दैन र यस्तो अवस्था भएको खण्डमा बजारमा बिभिन्न एलसीडी मोड्युलहरू छन् जुन सजिलै अर्डिनोमा जडित छन् र जसको लागत काफी सस्तो छ।
त्यहाँ के प्रकारको एलसीडी स्क्रीनहरू छन्?
हामी हाल मार्केटमा तीन प्रकारका एलसीडी स्क्रीनहरू फेला पार्दछौं।
पोइन्ट द्वारा LCD।
एल। इ। डी डिस्प्ले।
El लाइन LCD एक प्रकारको स्क्रिन हो जसले रेखा मार्फत जानकारी देखाउँदछ। जानकारी लाइनहरूमा राखिएको छ र हामी त्यो फ्रेमबाट बाहिर जान सक्दैनौं। यस प्रकारको एलसीडी सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने, किफायती र राम्रो हो तर यो एलसीडीको प्रकार पनि हो जुन कम से कम खेल दिन्छ। यसले केवल केहि जानकारी देखाउँदछ र सामान्यतया केवल पाठ मात्र हुन्छ.
El डट एलसीडी यसले लगभग पहिले जस्तो एलसीडीको जस्तो कार्य गर्दछ, तर अघिल्लो भन्दा फरकमा, भित्र बिन्दुहरूद्वारा एलसीडी हामीसँग पोइन्ट्सको म्याट्रिक्स छ। यस प्रकार, एलसीडीको यस प्रकारमा हामी पाठ र ईमेजहरू जहाँसुकै पनि एलसीडी स्क्रिनमा राख्न सक्छौं। अरु के छ त हामीसँग समान lcd स्क्रिन भित्र धेरै फन्ट आकारहरू हुन सक्छन्, केहि लाइनहरू को lcd प्रदर्शन मा नहुने कुरा, जुनको आकार सँधै समान हुनुपर्दछ।
El OLED प्रदर्शन यो धेरै आफ्नै प्रकारको प्रदर्शनको लागि हो जबकि अन्यहरूको लागि यो lcd का प्रकार भित्र हुन्छ। OLED डिस्प्ले एक स्क्रिन हो जसले हामीलाई जानकारी देखाउँदछ तर यसको निर्माण LCD स्क्रिनको भन्दा फरक छ यसको निर्माणको लागि जैविक कम्पोनेन्टहरूको साथ नेतृत्व डायोडहरू प्रयोग गर्दछ। अघिल्लो प्रकारको विपरीत, OLED डिस्प्लेले उच्च रिजोलुसन, रंग र प्रदान गर्दछ कम ऊर्जा खपत। कम्प्युटर मोनिटर वा डट एलसीडी जस्तै, OLED स्क्रीनहरूले डट वा पिक्सेलको म्याट्रिक्स प्रयोग गर्दछ (किनकि हामी समान प्रदर्शनमा धेरै र colorsहरू प्रयोग गर्न सक्छौं) सामग्री प्रदर्शन गर्न।
El LED वा LCD Led डिस्प्ले OLED डिस्प्ले जस्तै छ, तर नेतृत्व डायोडमा जैविक तत्व हुँदैन। यसको प्रदर्शन OLED प्रदर्शन भन्दा माथि छैन तर यसले डट LCD स्क्रीन भन्दा अधिक रिजोलुसन प्रदान गर्दछ र रंग प्रदान गर्दछ।
El TFT प्रदर्शन बजार मा नवीनतम प्रकारको lcd हो। हामी भन्न सक्दछौं कि TFT डिस्प्लेले कम्प्युटर मोनिटरहरू वा टेलिभिजनहरू जस्तै पिक्सेलहरू प्रयोग गर्दछ र हामी यी स्क्रीनहरू मार्फत कुनै पनि प्रकारको जानकारी उत्सर्जन गर्न सक्दछौं। यसको ऊर्जा खपत अघिल्लो कुनै पनि प्रकारको भन्दा ठूलो छ त्यसैले सानो आकारहरू प्रयोग गरिन्छ। यी प्रदर्शनहरूको आकार इन्चमा मापन गरिन्छ केही प्रदर्शनका अन्य प्रकारहरूको विपरीत। ती अक्षरहरू वा स्क्रिन चौडाई द्वारा मापन गरिएको छ।
कुन मोडलहरू सबैभन्दा लोकप्रिय छन्?
अनलाइन वाणिज्य को लागी धन्यवाद हामी lcd डिस्प्लेको अनगिनत मोडेलहरू फेला पार्न सक्छौं, तर केवल केहि सबैभन्दा लोकप्रिय हो। यो लोकप्रियता यसको सहज अधिग्रहण, यसको मूल्य, यसको प्रदर्शन वा केवल यसको गुणवत्ताको कारण हो।। यहाँ हामी यी मोडेलहरूको बारेमा कुरा गर्दछौं:
यो प्रदर्शन पुरानो नोकिया 5110११० मोबाइल फोनबाट आउँदछ। यी मोबाईलहरूको एलसीडीले मोबाइललाई मात दियो र कम्पनीले आफ्नै प्रदर्शनका लागि यस प्रदर्शन बेच्न जारी गर्यो। स्क्रीन मोनोक्रोम हो र लाइनस एलसीडी प्रकार हो। नोकिया 5110११० डिस्प्लेले r 48 पows्क्ति र col 84 स्तम्भहरू प्रदान गर्दछ। यसको शक्ति यस्तो छ कि यसले छविहरू प्रदर्शन गर्ने संभावना प्रदान गर्दछ जबकि कुशलतापूर्वक छैन। यसको प्रदर्शन धेरै राम्रो छ यद्यपि स्क्रिन सही तरीकाले हेर्न सक्षम हुन हामीले ब्याकलाईटिंग प्रयोग गर्नु पर्छ, सामान्यतया यो सामान्यतया यो ब्याकलाइटि byको साथ हुन्छ यद्यपि त्यहाँ मोड्युलहरू हुन सक्छन् जुन यस प्रकार्यको अभाव गर्दछ। प्रदर्शन एक फिलिप्स PCD8544 ड्राइभर को उपयोग गर्दछ। नोकिया 5110११० LCD स्क्रीन पाउन सकिन्छ १.1,8 युरो को लागी पसलहरु.
LCD हिताची HD44780
मोड्युल LCD हिताची HD44780 यो निर्माता हिताची द्वारा बनाईएको एक मोड्युल हो। Lcd प्यानल मोनोक्रोम हो र लाइन प्रकार हो। हामी फेला पार्न सक्छौं १2क्यारेक्टर प्रत्येकको २ लाइनका साथ मोडल र २० वर्णको प्रत्येक of लाइनको साथ अर्को मोडेल। हामी सामान्यतया कुनै पनि स्टोरमा हिताची एचडी 44780 LCD44780 find० एलसीडी डिस्प्ले पाउँछौं तर यो पनि हुन सक्छ कि हामी केवल स्क्रिनविना हिटाची एचडी XNUMX० कन्ट्रोलर फेला पार्छौं, मूल्यले हामीलाई यस्तो अवस्थामा मद्दत गर्न सक्दछ, लागत १.1,70० यूरो को लागी स्क्रीन प्लस कन्ट्रोलर र ०..0,6 युरो मात्र नियन्त्रणकर्ता।
I2C OLED एलसीडी
यो एलसीडी डिस्प्ले OLED प्रकार हो। I2C OLED LCD एक इन्च साइज मोनोक्रोम OLED स्क्रिन हो जुन A2ino लाई IXNUMXC प्रोटोकल मार्फत जोड्दछ।, यस प्रोटोकलले द्विदिशात्मक बस प्रयोग गर्दछ जसले हामीलाई पिनहरू बचत गर्न अनुमति दिन्छ, पहिले उल्लेख गरिएकाहरूका अगाडि चारवटा पिनहरू हुनु आवश्यक छ। यस LCD स्क्रिनको लागि ड्राइभर जेनेरिक छ त्यसैले हामी यसको प्रयोगको लागि निःशुल्क पुस्तकालयहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं। यस मोडेलको मूल्य अघिल्लो मोडेलहरू जस्तै सस्तो छैन तर यदि यो धेरै प्रयोगकर्ताहरूद्वारा सस्तो छ भने, हामी गर्न सक्दछौं १० युरो युनिटको लागि फेला पार्नुहोस्.
E-Ink LCD स्क्रीन सूचना प्रदर्शन गर्न इलेक्ट्रॉनिक मसी प्रयोग गर्दछ। बाँकी मोडेलहरू जस्तै, A2Do संग कुराकानी गर्न IXNUMXC प्रोटोकोल प्रयोग गर्दछ। स्क्रिनहरू TFT प्रकारका हुन् तर इलेक्ट्रोनिक मसी प्रयोग गरेर जसले खपत काफी कम गर्दछ तर रिजोलुसन गुमाए बिना। यद्यपि त्यहाँ कुनै रंग स्क्रिनहरू छैनन् (यस समयमा) तर तिनीहरू सबै छन् कालो र खरानी स्केल मा।
एलसीडी स्क्रिनको यस मोडेलको बारेमा एउटा जिज्ञासाको रूपमा, हामीले यो भन्नु पर्छ कि मूल्य र साइज एकजुट छन्। हामी सक्छौ बिभिन्न आकार र ठूलो आकार खोज्नुहोस्, पर्दा त्यति महँगो। यसैले, १ वा २. inch इन्च ई-ईंक स्क्रीनहरू तिनीहरूको प्रति इकाई २eयूरो छ। ठूला प्यानलहरू प्रति युनिट १,००० युरोसम्म पुग्न सक्छ।
कसरी एक LCD स्क्रीन Ardino मा जडान गर्ने?
एक LCD स्क्रिन र Arduino बीचको जडान धेरै सरल छ। सिद्धान्तमा हामीले माथि उल्लिखित पिनहरू पछ्याउनु पर्छ र तिनीहरूलाई अर्डिनो बोर्डमा जोड्नु पर्छ। जडान रेखाचित्र निम्न हुनेछ:
तर यो एक मात्र चीज होईन जुन हामीले LCD स्क्रिनलाई अरुडिनोमा जडान गर्नको लागि खातामा लिनु पर्दछ। अरु के छ त हामीले एउटा लाइब्रेरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ जसले हामीलाई कार्यक्रम दिन मद्दत पुर्‍याउँछ जुन हामीले काम गरिनको लागि आवश्यक कोड बनाउँदछौं सही रूपमा स्क्रीन संग। यो किताब पसल यसलाई लिक्विडक्रिस्टल भनिन्छ र यो निःशुल्क मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ आधिकारिक Arduino वेबसाइट। यो लाइब्रेरी बाँकी लाइब्रेरीको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, कोडको सुरूमा यस बमोजिम निम्ताएर:
एक ACD र LCD स्क्रिनको साथ काम गर्न बोर्डका लागि एक सरल र द्रुत तरीका।
के हाम्रो परियोजनाको लागि LCD स्क्रिन प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ?
माथिको साथ जारी राख्दै, हामीले आफैलाई सोध्नु पर्छ कि यो LCD स्क्रीन र हाम्रो व्यक्तिगत परियोजना वा प्रोजेक्टको लागि Ardino पाउन वास्तवमै सुविधाजनक छ कि छैन। व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ कि केहि परियोजनाहरूको लागि यो आवश्यक छ र बाँकीहरूको लागि यो आवश्यक भन्दा व्यक्तिगत कुरा हो। उदाहरण को लागी, हामी थ्रीडी प्रिन्टरको भर्खरको मोडेलहरु बारे कुरा गर्न सक्दछौं, केवल केही LCD डिस्प्ले र अरु केहि पनि जोड्ने मोडेलहरु, तर मोडेलको मूल्य धेरै महँगो हुन्छ।
यी अवस्थाहरूमा, मलाई लाग्दैन कि एलसीडी डिस्प्ले प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, तर केहि प्रोजेक्टहरूमा यस्तो हुँदैन जहाँ एलसीडी डिस्प्ले एकदम महत्त्वपूर्ण छ। पछिल्ला उदाहरणहरू प्रोजेक्टहरू हुन् जस्तै घडिहरू, खेल कन्सोल वा केवल जीपीएस लोकेटर। प्रोजेक्टहरू प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्नको लागि ग्राफिकल ईन्टरफेस हुनु आवश्यक छ। के हामी भन्छनौं कि मूर्ख हुन सक्छ, विशेष गरी अत्यधिक विशेषज्ञ प्रयोगकर्ताहरूको लागि, तर कुनै पनि कम्पोनेन्टले कुनै पनि परियोजना अधिक महँगो बनाउन सक्छ र यसलाई अविवाशनीय पनि बनाउन सक्छ। तसर्थ, यो अनुमान गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि हाम्रो प्रोजेक्टमा LCD स्क्रीन हुनु पर्छ कि पर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » Arduino » LCD स्क्रीन र Ardino